Ithebula Console Ingaphakathi
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ezinye izinto ezidingekayo ungenalo indawo esinqunyiwe endlini. Kulokhu, etafuleni console iba ikhambi elilungile lenkinga isitoreji izibuko, yocingo, izihluthulelo efulethini noma izinsimbi. Uthatha isikhala okuncane kakhulu futhi liba yindawo enhle ngoba imininingwane edingekayo futhi izakhi okuhlobisa, ezifana ikhandlela umnikazi, nesibani noma vase ka izimbali.
Inhlanganisela yizinhlobonhlobo nangobuciko
ukulingana Kalula etafuleni console ephasishi, ngisho ezindlini ezincane obujwayelekile. Futhi akudingeki ukuba liphindelela ukucinga ukhiye isikhwama emnyango ukuqinisekisa ukuthi iyatholakala. Phela, liyoba yindawo elula ukugcina izinto ezincane, kodwa okubaluleke ngokulinganayo ukuthi kufanele njalo kube ngakwesokunene futhi kuyodingeka lapho ushiya indlu. Ukuze ugweme isiphithiphithi lokudlela, izikhiye zemoto, izibuko kanye nezinye gizmos ewusizo angaluboni ebhokisini amancane indawo etafuleni console eduze ikhalenda ume izibaya futhi yolayini amafoni. Ensemble izingubo umphelelisi isiphanyeko, nenhle isambulela ukuma.
Lokhu ifenisha akuyona kuphela ukusebenza, kodwa futhi nenhle filigree buka, siyamjabulisa iso futhi amehlo izivakashi. Yingakho uyakwazi hhayi kuphela ukusiza ukuqeda imfuhlumfuhlu, kodwa futhi abe Umnqopho decor.
Ithebula njengoba isivikelo esiyinhloko-wezangaphakathi
Ithebula console nge imigqa eqondile kanye metallic ewumngcingo imilenze emide uyinto zokuhlobisa nenhle, ikakhulukazi ne ukwengeza umklamo kwesibani. ukubukeka Cosy nento uyakwazi ukunikeza wezangaphakathi e isitayela etafuleni shabby Chic ne Ukugcizelelwa upende asebekhulile.
ithebula enjalo uma oyifunayo zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela mini-bar. Iyoba enye engavamile futhi stylish kwezinye izinhlobo ibha futhi kuyokwenza ngokubeka isiphuzo. Mirror elise ngaphezu kwamanzi, kuyosiza ekwakheni uhlobo club.
Labo abafuna abe itafula sigqoka egunjini lokulala, kodwa musa banetincwadzi isikhala khulula, asikho isidingo ukuba ayiyeke le uhlelo. ithebula Console ikhambi ephelele okulala icwecwe, kanye ukwengeza Ottoman velvet, amabhokisi izesekeli nezibuko e uzimele yasekuqaleni uyakuthokoza zonke intombazane.
Phakathi nokubusa iNkosi Yelanga hit kokuziphatha isiqongo ka console amatafula. Inkathi Baroque yaletha nokuzinikela Umumo ezihlotshisiwe okunethezeka. Ihlanganisa Interiors zikanokusho isitsha sezimbali exotic imifanekiso yezinto zokudlala, izibuko esihle futhi Chandeliers okusezingeni eliphezulu, i-oki ozimele okwe nezitsha Patterned.
Inkosi isiFulentshi, ngokuba umsunguli we izitayela fashion, ihlanganise iqoqo umxhwele izesekeli umhlobiso izinto, kodwa akawatholanga efanelekayo amagugu abo nokubiyela. Design isungule ematafuleni amaningana Lyudovik Burbon futhi wayala samuntu esigodlweni sakhe master project. Ngakho, amahholo esigodlweni ngiye ngazuza ukuma kakhulu nge izisekelo ngesimo abanjengezilwane eziqoshiwe omkhulu lemilenze zegolide. Kwezinye iminyuziyamu namuhla zezinhlobo engcono lomhlangano yeNkosi Yelanga.
Ngasekuqaleni kwaleli ucezu nenhle of ifenisha isineminyaka kuphela personas ocebile, kodwa namuhla wonke umuntu angakwazi ukuthenga itafula console ngokusho ukunambitheka yakho. umklamo Standard nge isikhathi kwazivelela, kwakukhona nezinye izakhi somklamo futhi izici ukubuyekezwa:
Egibele Console. Yesilinganiso ziyafana ezibaziweyo emashalofini zokuhlobisa ngomlenze owodwa. Zingasetshenziswa njengoba sokumelela a socingweni noma njengoba itafula sigqoka.
Imi yodwa (ezimele) console. Setha amatafula ewumngcingo maphakathi ikamelo kanye ngasezindongeni. Kukhona onobuhle amasondo ezisetshenziswa ukukhonza kwasekuseni romantic.
Isandiso console. Kusukela inombolo ezimele ezahlukene imilenze: itafula ukuthi imi izinsika ezimbili, futhi ngezinye izikhathi ngisho okufanayo, kudinga ukusekelwa. Ibeka console odongeni futhi fixed kokungathembeki olufihliwe.
ithebula Console ingaphakathi ukuhlobisa noma isiphi isikhala, kodwa ngokuyisisekelo ziseZwini emakamelweni ephilayo, amakamelo okudlela futhi boudoirs. izinguqulo Classic abe umthwalo ekhethekile ukusebenza, zingabantu zokunethezeka - amafomu ongaqondakali, gilding kanye ezitsheni eyinkimbinkimbi. lula kakhulu ukubheka console ethuthukisiwe - amatafula wenziwe MDF, lacquered, ingilazi noma ezensimbi.
Console ayina ithebula egumbini lokulala noma sigqoka kuzohlanganisa ubuhle nokusebenza, ngenkathi kokuthatha up ubuncane isikhala. Ikhishi-transformer imodeli ezithakazelisayo kuyoba option best for ekamelweni elincane, ne ikhono ukufihla ithebula egcwele yokudlela. Esikhathini eziphilayo Igumbi console ingaba njengesihluthulelo ezimele art into, kanye esikhundleni evamile etafuleni ikhofi.
Wezingane embhedeni-transformer - indlela okunengqondo ilungiselelo igumbi kwengane
Wall isiphanyeko ephasishi - ucezu ifenisha kudingeka kuwo wonke ikhaya
Indlela ukukhetha ifenisha lokulala kwesokudla?
Herman Melville "i-Moby Dick noma White Whale": isifinyezo. "I-Moby Dick" - inoveli esekelwe endabeni yeqiniso
Ezemidlalo icala yefoni ku isandla bese usebenzisa izinzuzo main
Iyunithi Elementary yokuziphendukela kwemvelo - kuyini? Ukunqunywa iyunithi aphansi yokuziphendukela kwemvelo
Potency anda amadoda emva 50: udokotela iseluleko
"Furadonin" - ama-antibiotic noma cha? Umuthi 'furadonin ": isenzo, izinzuzo, Izimo
Indlela yokwenza uketshezi elikhazimulayo ekhaya?
Kungani ozithandayo abamhlaba izingono?
Ikhekhe nge aluhlaza okwesibhakabhaka: zokupheka